KEDU KA ANYỊ GA-ESI HAPỤ ISI GWỤỌRỌ OTULE AJỤ? – hoo!haa!!
Mgbe Jizọs Kraist biara n’ ụwa n’ ụdị nke mmadụ, o weturu onwe ya anị n’ụdị tụrụ ụmụ mmadụ n’anya.
N’agbanyeghị na ọ bụ nwa nke Chukwu, onweghị ọkụ ọ kụtara nyere onwe ya ma ewepụ mkpụrụ obi ndi mmadụ. O kwuru hoohaa, na ụmụ anụmanụ nwere abe ha na-edebe isi. Ọ sịkwara na ụmụ nnụnụ nwere akwụ mana ya bụ nwa nke mmadụ enweghị ebe ya na-edebe isi.
Mgbe ekwensu gara nwaa ya ọnwụnwa n’ikpa, o gosiri ya ọtụtụ akụ na ụba dị n’ụwa ma kwe ya nkwa ikponye ya akụ na ụba ahụ niile ka o fee yabụ ekwensu mana Jizọs jụrụ ajụ wee gwa ya na ọbụ sọsọ Nna ya, bụ Chineke ka ofufe niile ga-adịịrị.
Mgbe o jere ọrụ nkụzi nke o kwesịrị iji ụgbọ mmiri jee ọ gara ñụta ụgbọ nke mmadụ. Mgbe ọ gara Jerusalem okwesịrị iji anyịnya ibu jee, ọ gara ñụta anyịnya ibu ndi mmadụ. Mgbe o riri oriri ikpe azụ ọ gara yọta ụlọ ebe ọ nọrọ mee nkea. Ọ naghị ezipu ụmụ azụ ya ka ha were ụkwụ gawa ebe ya na onwe ya ga-aba ụgbọ mmiri mọbụ baa anyịnya ibu. Mba! Otu ihe ka ya na ndi ụmụ azụ ya na-eme…
Mgbe Jizọs ruchara ọrụ o wubere ụmụ azụ iri na abụọ ma gwa ha ka ha na-eme ihe ndi ya onwe ya mere.
Maka na ndi ụmụ azụ ahụ nakwa ndi ọzọ sotere ha na-akpa agwa ka Kraist, kpatara ndi mmadụ jiri hụ ha n’Antiọk wee kpọọ ha ndi otu Kraist. Ọbụ ahaa ka anyị niile na-aza tata. Onweghị ihe ojọọ dị na anyị zara ahaa mana ebe nsogbu dị bụ ma anyị ana-emekwa ihe ndi izizi zara ahaa na-eme ejiri baa ha yabụ aha.
N’OGE NKE ANYỊ
Ọkwa n’isi nsoa ka achọpụtara ndi kpọrọ onwe ha ndi otu Kraist ji ozu ndi mmadụ tọọ ntọ anị ụlọ ụka. Ka aga-asị na nkea esoghị, na nso nsoa ka ndị na-ázáchaa aha ndi otu Kraist jiri egbe ga laa ndụ ndi mmadụ n’ighi n’ime ụlọ ụka Chukwu. Aga agụwa ole ghara ibe ya?
Ihe doro anya bụkwa na anyị niile bụ ndi njọ mana ọbụladị Pọl, mgbe ọ na-akụzi nkuzi gwara ndi na-eso ụzọ Kraist na enwere ụdị njọ ekwesịgh ka-akpọọ aha n’etiti ha.
Nke ekwesighị ijụ dịka ajụjụ bụ ma anyị aga-adabanwu na njọ, aziza nkea bụ éé, anyị ga-adabanwu na njọ. Kama na anyị ekwesighị iji aka anyị na-akpọku njọ ka ọ bịara anyị ọrịrị.
Ị gagharịa n’ogbe anyị dị iche iche kita ị ga-ahụta na ụlọ ụka na-achọzị ịkarị ụlọ obibi. N’agịga ụzọ anyị niile ị ga-ahụkwa ebe amadoro ihe ntụzi aka iji gosi ndi mmadụ ebe otu ụlọ ụka mọbụ nke ọzọ dị. Ndi isi ụka niile ndia bugbado ndi amụma na ndi ọrụ ebube.
Akụkọ na-eju ndi be anyị ọnụ kita bụ ka man of God nkea mọbụ nke ọzọ si ahụ ihe dabara na mmiri, mana ebe ha si nwete ike ha ji ahụ ihe ndia anaghị agbasa anyị.
Ị bịa nso n’ụlọ ụka kịta, osika ike ka ị nụ nkuzi maka nzọpụta. Ihe bụzị ọchịkọta n’okwu chukwu anyị bụ ikụ mkpụrụ akpọrọ soosidi, ka nwanyị ajado siri were ihe niile onwere nye onyinye, ka nwanyị Zerefat siri bunye Elaija nri ọka na mmanụ nakwa ka esi butere Solomọn onyinye nke eze nwanyị nke Sheba.
Ihe ndia niile abụghị njọ mana kedu ihe mere na anyị anaghị echete ka Elaisha siri jụ inara onyinye nke onye agha bụ Neman? Gịnị mere na anyị anaghị ahụ ebe Jizọs sị na onye ga-eso ya ga-ajụ nne ya, jụ nna ya, jụ nwunye ya nakwa ndi ọzọ jụkwuori ma onwe ya were sobe ya.
Ihe ejiri mara na mmadụ etozugo etozu ibụ man of God kịta bụzị igba ụgbọ ala nke ndi ike nakwa ụgbọ elu. Ọzọkwa bụ irụ otu obodo kpọọ ya ụlọ ụka ma see onyonyoo ya na nwuye ya mado n’ ụzọ ọgba wara wara anyị di iche iche.
Ibatazia n’ụlọ ụka hụzia ụdị akwa ụmụ nwanyị na-eyi abịa ụka, i nwere ike ijụ ma ọbụkwa ụlọ ụka ka ọbụ ụlọ ndi ji ahụ ha achụ ego ka ibiara.
Nwanyị iyi akwa nwoke ekwuru okwu ya n’akwụkwọ nsọ esozighị n’okwu Chukwu tata. Ụmụ nwanyị ikechị isi ha esoghịkwa.
Ụmụ ikorọbia anyị biazia ha-asị ka achara ha maka nke ha kpọrọ sagging nakwa ike isi yiri ịyeri ntị ka ụmụ nwanyị.
Kedu uru ihe ndia ga-abara anyị ma ha butere anyị itufu ndụ anyị?
Ka anyị tụgharịa uche n’ihe ndia nakwa ndi ọzọ. Yọọ Chineke mgbaghara ma chegharịa.
*Ihe m na-ekwu ebea metụtara mụ n’onwem, ọbụghị ka mụ kọchaa onye ọbụla kama ka anyị mara na anyị adabawo n’olulu, welite aka anyị elu ka ewere dọpụta anyị*
Ya gazie nu!!!
Next Post: NNPC AWỤCHIELA STEETI BENUE MAKA ỊCHỌ MMANỤ